Somalia Oo Beenisay Inay Kenya Kala Heshiisay Kiiska Badda – Heemaal News Network
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ( Khadar) ayaa beeniyay wararka sheegaya in dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ay heshiis ka gaareen kiiska badda oo weli horyaalla maxkamadda ICJ, isla markaana ay garwadeen ka aheyd dowladda Qatar.
Wargeyska The Star ee kasoo baxa Kenya ayaa qoray in Dowladahaan nacfiga kasoo baxa 50% uu dal weliba qaadan doono si loo soo afjaro kiiska daba-dheeraaday ee Maxkamadda ICJ horyaalla, hayeeshee Mahdi guuleed uu warkaasi beeniyay.
“ Warbaahin ayaa qortay in Soomaaliya iyo Kenya ay ku heshiiyeen inay qeybsadaan lacagaha ka soo baxa saliida iyo gaaska badda dhex ceegaaga 50/50 waa mid aan sal iyo raad toona lahayn. Waxaan sugeynaa xukun cadaalad ah oo ay ICJ ka bixiso dacwada badda ayuu yiri” Mahdi Guuleed oo qoral soo dhigay Barta twitter-ka.
Kiiska Badda ee u dhaxeeya Soomaaliya & Kenya ayaa waxaa uu horaayaalla Maxkamadda ICJ, hayeeshee tuhunka la xiriira heshiiska ayaa soo baxay markii Ergay ka socda Dowladda Qatar uu safaro ku yimid Muqdisho & Nairobi lana kulmay Madaxda dowladaha Kenya & Soomaaliya, isla markaana dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay so celisay xiriirka kala dhaxeeya Kenya.